Darbiga Xerada Kililka Ee Dhargigu Dhisay Oo Ladumiyay - Cakaara News
Darbiga Xerada Kililka Ee Dhargigu Dhisay Oo Ladumiyay
Jigjiga(CN) Talaado, 10ka November 2015, Mas'uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu horkacayo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka goob joog ka ahaa duminta darbigii xerada kililka ee dhargigu dhistay 50 sano kahor kaas oo caqabad ku ahaa isugudubka dadka iyo gaadiidka wax wayna u dhimaysay fidinta iyo kor uqaadida bilicda magaalada.
Darbigan xerada kililka oo uu dhistay gumaysigii dhargigu 50sano kahor ayaa ahayd meel xarun u ahayd dhargiga oo lagu dhaco hantida shacabka soomaalida laguna gumaado dadka deegaanka udhashay. xoolaha gala iskadaaye cidda ag martana aysan badbaadin ayaa taariikhda markii 1,aad ay xukuumada maanta jirtaa dumisay iyadoo xukuumadihii kaladuwanaa ee deegaanka horay u soo maray ay kudhici waayeen.
Hadaba xukuumada maanta ka arimisa deegaanka ee uu majaraha u hayo XDSHSI oo ah mid u dhaganugul shacabka kuna dhisan dareen iyo aragti shacab ayaa iyadoo u danaynaysa shacabkeeda horay u aragtay kadibna qiimaysay caqabada darbigan ee dhanka isugudubka. Waxayna balan kuqaadeen in caqabadaas lagagudbo oo uusan dhicin wareeg dheer oo dib danbe shacabku ugalo. waana tan keentay in darbigii xerada kililka maantaladumiyo oo bajaajka iyo shacabka lugta ahi ay iskudaba maraan.Tanina waxay kutimid kadib diyaargaraw wakhti gaaban gudihii ay xukuumadu kudhistay xarun madaxtooyo oo cusub oo qaadatay mudo 1sano iyo 5 bilood ah.
Dhanka kalana, Shacabka magaalada jigjjiga ayaa si wayn usoo dhaweeyay duminta darbigan oo iyagoo bogaadinaya sacab farxadi kudheehan tahay kusoo maray xerada.
Waxaana intii duminta xeradan lagu jiray uu madaxwaynuhu ku wareejiyay afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq beer wayn oo ay madaxtooyadu usamaysay in shacabka deegaanku kaga daydo dhanka tabaca beeraha iyadoo afhayeenkuna uu si wayn ugudoomay. Beertan ayaana hodan ku ah: canbaha, babayga, basasha,yaanyada iyo qajiga oo runtii intay kufilaatay xarunta dadka lagu caawin jiray.